Etu aga - esi emezu nyocha SEO | Martech Zone
Etu aga - esi eme nyocha SEO zuru ezu
Tọzdee, Disemba 29, 2020 Tọzdee, Disemba 29, 2020 Douglas Karr
N’izuụka gara aga a, otu onye ọrụ ibe m kwuru na ya nwere onye ahịa ọ dị ka arapara na ọkwa na ọ chọrọ ihe SEO nyocha nke saịtị iji hụ ma enwere nsogbu.
Kemgbe ọtụtụ afọ, engines ọchụchọ gbanwere ruo n'ókè nke na ngwaọrụ nyocha saịtị ochie anaghị enyere aka ọzọ. N'ezie, ọ meela afọ 8 kemgbe m kpasuru ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọchụchọ na ndị ndụmọdụ ndụmọdụ site n'ikwu SEO nwuru anwu. Ọ bụ ezie na isiokwu ahụ bụ clickbait, m na-eguzo n'akụkụ. Nchọgharị ọchụchọ bụ engines omume n'ezie, ọ bụghị naanị crawlers na-enyocha ọnụọgụ na bytes nke saịtị gị.
Ọhụhụ nchọpụta dabere na isi isi anọ:
Ọdịnaya gị - otu ị si hazie, gosi, ma bulie ọdịnaya gị na bulie sistemụ njikwa ọdịnaya gị n'ihi na search engines iri ari na-achọpụta ihe gị na saịtị ahụ bụ ihe.
Ikike gị - kedu ka ngalaba ma ọ bụ azụmahịa gị si kwalite na saịtị ndị ọzọ dị mkpa na engines ọchụchọ na-enwe ike ịgbata ma mata ntụkwasị obi na ikike gị.
Ndị asọmpi gị - ị ga - eme nke ọma ka asọmpi gị na - enye gị ohere, yabụ ịghọta ihe ndị asọmpi na - eme nke na - eme ka ha di elu dị oke mkpa ga - aga nke ọma.
Ndị ọbịa gị - Nsonaazụ nchọta ọchụchọ dabara adaba na omume onye ọbịa gị. Yabụ, ịkwesịrị ịnye atụmatụ na-akpali akpali, itinye ọnụ maka iji kesaa, kwalite, na ndị ọbịa ka ha na-egosi gị nsonaazụ ha. Nke a nwere ike ịdabere na ọnọdụ, ngwaọrụ, oge, wdg. Imkwado maka omume mmadụ ga-eme ka ọhụhụ ọchụchọ ka ukwuu.
Dịka ị pụrụ ịhụ, nke a pụtara na ị ga - eme ọtụtụ nyocha maka nyocha an site na nzuzo na arụmọrụ na nyocha asọmpi, na nyocha na-agbanwe agbanwe, na ndekọ na nyochaa omume ndị ọbịa na ibe.
Mgbe ọtụtụ ndị ọkachamara nyocha na-eme nyocha SEO, ha anaghị agakarị akụkụ ndị a niile na nyocha ha niile. Imirikiti ndị na-ekwu okwu na-eme nyocha ihu igwe SEO maka nsogbu ndị ọzọ.
Nyochaa Bụ Ngwa ngwa, SEO Abụghị
Mgbe m kọwaara SEO onye ahịa, ana m ekekọrịta ihe atụ nke ụgbọ mmiri na-agafe n'oké osimiri. Ọ bụ ezie na ụgbọ mmiri ahụ nwere ike ịnọ n'ọnọdụ ọrụ zuru oke ma na-aga n'ụzọ ziri ezi, nsogbu bụ na e nwere ụgbọ mmiri ndị ọzọ nwere ike ịdị ngwa ngwa ma ka mma… na ebili mmiri na ifufe nke algorithms nwere ike ịkwado ha.
Otu nyocha SEO na-ewe nseta oge iji gosi gị otu ị si eme, otu ị si eme megide ndị asọmpi, yana otu ị si eme n'ihe gbasara algorithms njin ọchụchọ. N'ihi na audits na-arụ ọrụ, mkpa ka ị nọgidere na-agba ọsọ na nyochaa arụmọrụ nke gị na ngalaba… bụghị naanị na-eche na ọ bụ a set ya na-echefu ya obibia.
SE Websitenye ọkwa weebụsaịtị
Otu ngwá ọrụ si n'ebe ahụ ga-eme nyocha a ngwa ngwa maka gị bụ Ghọta usoro nyocha nke ọkwa. Ọ bụ akụrụngwa nyocha zuru ezu nke enwere ike ịhazi ma nye gị akụkọ edepụtara iji nyere gị aka ịkwalite ma melite ọhụhụ njin ọchụchọ gị na ogo gị.
The SE ingnye ọkwa na-enyocha nyocha na njikwa njikwa igwe isi niile:
Njehie Nka na ụzụ --Gbalịsịrị ike iji aka gị dezie ihe ndị ị na- eme na hreflang nke ọma, lelee ntọala mgbagharị, wee chọta peeji abụọ. N'elu nke ahụ, nyochaa peeji nke nwere nọmba 3xx, 4xx, na 5xx, yana ndị nke robots.txt gbochiri ma ọ bụ jiri akara noindex mee.
Meta Tags na isi - Chọta peeji nke na-efu ma ọ bụ oyiri meta mkpado. Hazi aha njirimara kachasị na nkọwa mkpado nkọwa ga-eme ka ị mata mkpado ndị toro ogologo ma ọ bụ dị mkpụmkpụ.
Weebụsaịtị na-adọnye Ọsọ - Lelee ngwa ngwa otu weebụsaịtị wepụtara na ngwaọrụ mkpanaka na ihe nchọgharị Internetntanetị na, ọ bụrụ na ọ na-ewe ogologo oge, nweta ndụmọdụ Google banyere otu esi ebuli ya.
Nchịkọta foto - Nyochaa ihe oyiyi ọ bụla na weebụsaịtị ma hụ ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla na-efu ma ọ bụ nwee njehie 404. Gụnyere, chọpụta ma onyonyo ọ bụla buru oke ibu ma, n'ihi nke a, belata ọsọ ọsọ nke saịtị ahụ.
Njikọ Esịtidem - Chọpụta ole njikọ dị na ya na webụsaịtị, isi mmalite ha, na ibe ebugharị, yana ma ha nwere akara nofollow. Knowingmara otu esi agbasa njikọ dị n'ime saịtị ahụ ga - enyere gị aka melite ya.
Ngwá ọrụ ahụ adịghị akpagharị na saịtị gị, ọ na-ejikọ ma nchịkọta na data njikwa ọchụchọ Google n'ime nyocha zuru ezu iji nye gị akụkọ doro anya nke saịtị gị, otu esi eme nke ọma na isiokwu ịchọrọ ịhazi, yana dị ka otu ị si emegide ndị asọmpi gị.
SE'snye ọkwa si ikpo okwu zuru oke ma na-enye ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ aka ịchịkwa akụkụ ọ bụla nke igbe ahụ yana Whitelabel akụkọ ndị ahụ ma ọ bụrụ na ị bụ onye ndụmọdụ SEO ma ọ bụ ụlọ ọrụ:
Akpaghị aka na ndokwa akụkọ na nyocha na-enye gị ohere idobe weebụsaịtị gị n'okpuru nyocha oge niile.
SE Ọnọdụ bot nwere ike ileghara ntuziaka sitere na robots.txt anya, soro ntọala URL, ma ọ bụ soro usoro iwu gị.
Hazie akụkọ nyocha nke weebụsaịtị gị: tinye akara ngosi, dee ihe, ma mee ya gi ka enwere ike.
Are nwere ike ịkọwapụta ihe ekwesịrị ịme dị ka mmejọ.
Bido Nnwale Ọnwụnwa 14 nke Oge SE
Download ihe nlele PDF akụkọ:
Alexa akọrọ nke a infographic, Nka na ụzụ SEO Audit Guide for Beginners, nke na-arutu aka n'okwu 21 na edemede 10 - ihe niile ị ga - ahụ na SEO nyocha ọkwa nyocha:
Ngosipụta: Ana m eji nke m SE .nye ọkwa Mgbakwunye njikọ na edemede a.
Tags: Alexa seo oditiamazonamazon Alexanyochaa asọmpiisiokwu analysisngwá ọrụ isiokwundaba page oditinyocha ọsọ ọsọ peejinyochaa pdf saịtịnyocha igwe nyochanyocha igwe njikarịcha igweNyochao seooditi
MarketerHire: Ebee igha ego onye ahia ahia
AudioMob: Kpoo na ire ahia ohuru n’aho ohuru na Mgbasa ozi di iche-iche
ọrụ nyocha webụsaịtị
Jun 28, 2015 na 8:22 nke ụtụtụ
Ngwa saịtị ozi mara mma. Nke a bụ ọganihu karịsịa maka ndị mbido.